Himalaya Dainik » ईप्रका भित्रै पल शाहका बर्डिगार्डहरु तैनाथ: प्रहरी ट्वा… (भिडियो)
ईप्रका भित्रै पल शाहका बर्डिगार्डहरु तैनाथ: प्रहरी ट्वा… (भिडियो)
ईटहरी- प्राय: कलाकारहरुको विवाद कुरा काठमाडौ केन्द्रित हुन्थे । तर, यसपटक धरानमा पनि बिवाद हुन पुग्यो। लोकप्रिय अभिनेता पल शाहका असिस्टेन्टले अभ-द्र व्यवहार र कु ट पि ट गरेको आरोपमा पललाई उ जु री पर्यो । भलै छोटो समयमै यो का ण्ड ले एउटा निचोड भने पाईसकेको छ ।
नेपाल चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष तथा निर्देशक संघ केन्द्रका सचिव समेत रहेका अरुण कुमार प्रधानमाथी पलका असिस्टेन्टले मु क्का हानेको सिसि क्यामेरा फुटेजमा प्रष्टै देखिएको थियो ।
यता, प्रधानले पनि पलमाथी असिष्ट ब्य व हार गरेका थिए । यी अनेक बाद विवा-दलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय धरानले मिलापत्र गरेको छ ।
यसैक्रममा ईलाका प्रहरी कार्यालयभित्रको हेर्न लायक त पलका बर्डिगार्डहरु तैनाथ भएका दृश्य थिए । जवकी त्यहा प्रहरीको साथमा पत्रकारहरु र केही कलाकारहरूको मात्र उपस्थिति रहेको थियो । ईलाका प्रहरी कार्यालय भित्र दर्जनौ सुरक्षाकर्मीहरु छन् । के पललाई सो कार्यालय भित्र पनि बर्डिगार्डकै घेराबन्दी आवस्यक थियो त ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
पत्रकारहरुलाई अ ब रोध गर्दै बर्डिगार्डहरुको तडकभडक थियो । उक्त दृश्यलाई औल्याउँदै ईलाका कार्यालय भित्र सुरक्षाको जिम्मा कस्को ? भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा ईलाकाका सुरक्षाकर्मी भने एरिया भित्रै ‘सबै ठाउँ प्रहरी नै कहाँ पुग्न सक्छ त’ भन्ने जवाफ फर्काउदै आफुलाई कमजोर सावित गरिरहेका थिए । दिउँसो ३:३० मा प्रहरी कार्यालयमा आउने भनेका पल ६:४० मा प्रहरी कार्यालयमा आएका थिए । उनले यहाँ पनि आफ्नो स्टारडम देखाए ।
प्रदेश १ मा गीत सुटिङमा आएका शाह खाना खान धरान १० को ज्वाँई खाना घरमा पुगेका थिए । शाहलाई खदा लगाएर सम्मान गर्ने क्रममा पनि पल फोटो खिच्न मानेका थिएनन् । फागुन १५ गते होटल रत्न इनमा नेपाली चलचित्रको प्रभाव सम्बन्धी कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्दा आउन नमाने पछि प्रधानले अतिथिको नाम फेसबुकमा राखेको र सो पोस्ट त्यही हटाएका थिए । प्रधानले नाम हटाएपछि सामान्य भना भन भएको थियो । सो क्रममा झ ग डा भएको थियो । प्रधानलाई शाहका मेनेजर जोशीले आ क्र म ण गरेका थिए ।